Riverdale Season 1 ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
Mystery , Crime & Teen Drama ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလေးဖြင့်ပြီးတော့ နောက်အပိုင်းတွေမှာ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဘယ်လိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာမလဲ စတဲ့ ပုံစံမျိုးကို နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ရသ တစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ …
Rating အရလဲ IMDb မှာ 7.8/10 နှင့် Rotten Tomatoes မှာ 88% ရရှိထားတဲ့ rating မြင့်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ ….
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင် –
အာချီဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ဘက်ဒီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက အိမ်နီးချင်းတွေ ဘက်ဒီက အာချီကို သဘောကျနေခဲ့တယ် …
ဒါပေမဲ့ အာချီတစ်ယောက်က ဂီတကို ဝါသနာပါပြီး
သူ့ ကို ဂီတအကြောင်းသင်ပေးနေတဲ့ ဆရာမနဲ့လည်း စိတ်ကစားမိနေခဲ့တယ် ….
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ရေးဗားဒေလ်ဆိုတဲ့ မြို့လေးကို အခြေခံထားတာဖြစ်တယ် …
ရေဗားဒဲလ် မြို့လေးက တစ်ခြားနေရာတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးပေမဲ့ သူ့အနေအထားနဲ့သူ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေတယ် …
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ မြို့လေးကို အရောင်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ် … အဲ့ဒါက နွေရာသီ တစ်ခုမှာ အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ သူဌေး လူကုန်ထံ ဘလော်ဆန် မိသားစုက ချယ်လ်နဲ့ ဂျေဆင် ဆိုတဲ့ အမြွှာမောင်နှမ နှစ်ယောက်မှာ ဂျေဆင် တစ်ယောက် သေသွားရတာပဲဖြစ်တယ် … သေသွားပေမဲ့ အလောင်းကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး …
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းဖွင့်ခါနီး တစ်ပတ်လောက်မှာ မြို့ကို လော့ခ်ျ မိသားစု သားအမိ နှစ်ယောက်
ထပ်ပြောင်းလာခဲ့တယ် …. လော့ခ်ျမိသားစုက သမီးဖြစ်တဲ့ ဗရော်နီကာ ကလည်း အာချီ တို့ ဘက်ဒီ တို့ နဲ့ အတန်းတူတစ်ကျောင်းတည်း တက်ရတဲ့အခါ …
သူတို့ သုံးယောက်ကြားမှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ???
ဒီမြို့လေးက မိသားစုတွေက ဆက်စပ်နေကြတော့ သူတို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှု့တွေကရော ဘယ်လို ဆက်စပ်မှု့တွေ ဖြစ်မလဲ ???
နောက်ပြီး ဘလော်ဆန် မိသားစုက ဂျေဆင် သေရတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်မလဲ ??? ဂျေဆင်သေဆုံးရမှု့မှာရော ဘယ်သူတွေ ပါဝင် ပတ်သတ်နေဦးမလဲ ??? ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ပြီးမှပဲ သိရမှာမို့ ကြည့်ပေးကြပါလို့ ….
တစ်ပိုင်းနဲ့ တစ်ပိုင်းလည်း တကယ် မရိုးရအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ …
တစ်ပိုင်းပြီး နောက်တစ်ပိုင်းက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းတတ်လောက်အောင် ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် … မလွတ်တမ်း ကြည့်ရှု့သင့်ပါတယ် …
မင်းသားလည်းချော မင်းသမီးတွေကလည်း ချောတော့ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ် xD …
Encoder : Bibbidi-Bobbidi Boo
* * * * * Season 1 ပြီးပါပြီ * * * * *
Trailer: Riverdale Season 1 ( 2017 )